Dalalka Midowga Yurub oo dib ugu yeeraya danjirayaasha ka jooga Ruushka. | Maalmahanews
Dalalka Midowga Yurub oo dib ugu yeeraya danjirayaasha ka jooga Ruushka.
In ka badan 10 dal oo Midowga Yurub ah oo ay ka mid yihiin Poland, Latvia, Lithuania, Ireland, Faransiiska, Jarmalka, Netherlands, Estonia, Bulgaria, Czech Republic iyo Danmark – ayaa la filayaa inay mamnuucaan diblomaasiyiinta Ruushka ah si ay taageeradooda ugu muujiyaan dowlada UK oo Khilaaf dibloomaasiyadeed kala dhaxeeyo Ruushka kaas oo ku saabsan kiisaska sumaynta nin basaas ah.
Go’aanka ayaa la gaaray jimcihii la soo dhaafay intii lagu jiray shirkii hoggaamiyayaasha Midowga yurub.
Sidoo kale Jimcihii, Warfidiyaha Bloomberg ayaa soo wariyay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sidoo kale lagu booriyay inuu diblomaasiyiinta Ruushka ka eryo wadanka si uu taageero ugu muujiyo UK.
Brussels ayaa mar hore soo celisay, Markus Ederer, oo ah madaxa Midowga Yurub ee Ruushka, si wadatashi loola yeesho.
Talaabadaas ayaa imaaneysa maalmo kadib markii London laga eryay 23 diblomaasiyiin oo Ruushka ah halka Moscow ay isla markiiba talaabo midaas la mid ah uga jawaabtay.
Xoghayaha warfaafinta ee Ruushka, Dmitry Peskov ayaa u sheegay warbaahinta Ruushka in xukuumada aan wax war ah ka helin Mareykanka oo ku saabsan dibloomaasiyiinta Ruushka oo lasoo saarayo islamarkaana Moscow ay diyaar u tahay inay si la mid ah uga jawaabto hadii taasi dhacdo.
Xiisadda Ingiriiska iyo Ruushka ayaa kacday ka dib markii Ra’iisul Wasaaraha Britain Theresa May ay ku eedeeysay Ruushka in uu sumeeyay Sergei Skripal iyo gabadhiisa Yulia kaas oo labada dhinac u kala jajuusi jiray